किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा
तर अब यसरी चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रायः हरेक अस्पतालमा स्किन उपचारको छुट्टै युनिट खुलेको छ भने छालाको मात्रै उपचार गर्ने क्लिनिकहरु पनि सहर–बजारमा देखिएका छन्। अझ भन्ने हो भने विशेष ब्युटिपार्लरहरुमा समेत कालो पोतो हटाई अनुहारको सौन्दर्य बढाउने गरिन्छ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **